Nke bụ eziokwu bụ na anyị chọrọ egwuregwu ndị ọzọ dị ka Pokémon GO | Gam akporosis
Naanị ụnyaahụ m na-ekiri otu n'ime vidiyo ndị ahụ a na-akọrọ na Facebook na nke na-akọghachi mgbanwe dị n'etiti nwata site na ndị a mụrụ na 60, 70s na mmalite 80s, ruo ndị a mụrụ mgbe e mesịrị na ndị mikpuru onwe ha na ụwa nke teknụzụ. Ma ihe na-atọ ọchị na vidio ahụ bụ na mgbe a hapụrụ anyị ile onwe anyị ụtọ na ụtọ, ọ bụ mmadụ ole na ole buru oke ibu, ebe ọ bụ na anyị nọrọ ụbọchị nsọ niile n'okporo ámá na-egwu egwu.
Ọ bụ ebe a kpọmkwem ebe kpatara ihe kpatara nbanye a bụ nke m metụtara ya na Pokémon GO, ya mere na eziokwu dịwanye elu. Egwuregwu vidio, mbadamba, consoles, PC na ọtụtụ narị ọwa na TV, emeela ka anyị bụrụ ndị na-anọkarị na nwata na-etinyekwu oge na-arụ ọrụ na ihe ịchọ mma niile ahụ, nke gwuru egwu malite n'ụtụtụ ruo mgbe anyanwụ dara. E nweelarị narị narị ndị egwuregwu na-ekwu na ekele maka egwuregwu vidio a ha na-apụ kwa ụbọchị ịchụ nta na agbata obi ha, nke na-amanye ha ịga ije, ịga ije, ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya ígwè na ọbụna were skateboard ahụ. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji achọ egwuregwu ndị ọzọ dịka Pokémon GO.
1 Ezigbo eziokwu
2 Ngwakọta nke ụwa abụọ
Eziokwu bụ na n'ime akụkọ akụkọ a na-abata kwa ụbọchị gbasara Pokémon, otu n'ime ihe ịtụnanya bụ na egwuregwu vidio a enwetala wepu umuaka n’akwa ha n'ime ụbọchị anọ a hapụrụ ya na mpaghara. Ọ bụ ihe na-eju anya ma dị oke mma na ogologo oge ma ọ bụrụ na ụdị egwuregwu ndị a na-amalite n'ezie ime ka anyị niile nwụọ, n'ihi na egwuregwu vidio a na-emetụ ọtụtụ ọgbọ nke ọgbọ dị iche iche aka.
Anyị anaghị ekwu okwu naanị uru ahụike, nke kachasị mkpa, mana site n'ịgba ndị mmadụ ume ka ha na-apụ apụ mgbe niile n'okporo ámá, ha na-enwetakwa ndị mmadụ na azụmahịa na-ahụkwu ndị ahịa na-akwụsị maka soda ka ha na-aga n'ihu ịchụ nta ha iji chọta Pokémon zoro ezo na-eche n'akụkụ nkuku.
Pokemon GO bụ ara ugbu a. Nke a dị na Central Park. Ọ bụrịrị HQ maka Pokemon GO. pic.twitter.com/3v2VfEHzNA
Ma ọ bụ na ọ gaghị ewe oge maka ndị ahụ poképaradas ghọọ ohere nkịtị na ọbụna ụgwọ ụlọ nke ụlọ ahịa ndị dị nso na-arị elu na ọnụahịa. Ahụla m na ụfọdụ nzukọ na ụfọdụ ndị ọchụnta ego na-achọ ụzọ ha ga-esi jiri oke ebili mmiri a kpọrọ Pokémon GO.
Ngwakọta nke ụwa abụọ
Mana ezigbo ihe ịga nke ọma n'inweta ọtụtụ narị puku mmadụ ịga n'okporo ámá bụ n'ihi na Pokémon GO maara agwakọta na teknụzụ ụwa, bụ onye fọrọ nke nta ka ezuru mkpụrụ obi anyị, ịmanye anyị ịpụ na ụwa ọzọ dị adị karịa nke anyị nwere ike ịchịkwa ya nke mere na ọ fọrọ nke nta ka anyị si na ya gafere. Ọnọdụ eziokwu gbara ọkpụrụkpụ ga-abụ onye kpatara nke a, ọ gaghị ewe ọnwa ole na ole maka ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ iji kwupụta egwuregwu egwuregwu vidiyo ha na-abawanye.
Ya mere, ndị franchises maara niile dị ka Star Wars, ikekwe na-achọ usoro iji nwee ike iji eziokwu dịwanye elu ịhapụ ngwaahịa ọhụrụ nke na-agba ọtụtụ nde ndị ọrụ ume ịnwale egwuregwu ha. N'ihi ihe ịtụnanya niile na-aghọ, anyị nwere ike ịsị nke ahụ Nintendo akpọghachila ya ọzọ na Niantic Labs, nke ya na Ingress tọgbọrọ ya maka ụdị egwuregwu a na Pokémon GO ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma, yabụ anyị nwere ike ịtụ anya ihe niile sitere na eziokwu a dịwanye elu nke yiri ka ọ ga-anọ n'azụ eziokwu ahụ nke ụlọ ọrụ ndị kachasị mkpa chọrọ nke oge dika Samsung ma obu Facebook.
Na na anyị nọ na mmalite ụbọchị nke egwuregwu vidio nke meworo ulo oru mpaghara na mba atoUnited States, Australia na New Zealand. Achọghị m iche n'echiche mgbe ọ dịịrị onye ọ bụla nwere ọtụtụ nde ndị egwuregwu na-agụ akụkọ ndị kachasị njọ ma na-aga n'okporo ámá dịka ọ dị ọtụtụ iri afọ gara aga tupu ngwaọrụ ndị mmụọ ọjọọ a were ọtụtụ awa na oge nke oge anyị n'efu.
M na-echetara gị na ị nwere ebe a mini ndu ndu, ụfọdụ ole ndụmọdụ na chekwaa na data oriri y ebe a ka ọ ghara iri nnukwu batrị ọnụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Anyị kwesịrị karịa egwuregwu vidio dị ka Pokémon GO
Kedu ka ị ga - esi kwughi na Ingress adịworị afọ atọ, na n'ezie na ọ sitere n'otu Pokemon Go mmepe na gịga ha bụ n'ezie Ingress portals? N'ikwu okwu banyere egwuregwu ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ na-apụta n'ekwughị onye ọsụ ụzọ nke jere ozi dịka ihe ndabere maka PG, na nkenke ... Edemede ezughi oke, n'echiche m.
Daalụ maka echiche Dumakae! Ọ bụ eziokwu, edeziwo m ya iji tinye na Niantic Labs nke tọrọ ntọala Pokémon GO. Naanị ihe Pokémon nweela ike ime ka eziokwu dịwanye elu wee bụrụ Ingress nọrọ n'ọtụtụ ndị egwuregwu ole na ole, ọ bụ ezie na ọ na-arụsi ọrụ ike na ee.
Ekele m ọzọ, emegola m ntinye ahụ. Daalụ!
Daalụ maka ịza Manuel. Ọ bụ eziokwu na Ingress enweghị mmetụta nke Pokemon Go dị anya, mana obi abụọ adịghị ya na ndị na-egwu Ingress bụ ndị ezi pigs nke Niantic. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke portals (gyms na PG) bugara Ingress site na ndị egwuregwu. Ha nwalere “sayensi” niile nke ọnọdụ ziri ezi n’ebe anyị nọ n’oge gara aga, na kwa nchọpụta nke “ndị aghụghọ” na-egwu egwu n’ụlọ site na GPS simulators. (Niantic siri ike iji aghụghọ ndị ahụ ghọgbuo, mgbe ọ machibidoro gị ị gaghị agaghachi)
Ndị na-akpọ Ingress nọ na-ata ahụhụ site na batrị dị elu na oriri data nke egwuregwu a ogologo oge, na ọ dị nwute na Pokemon Go ketara ya, yabụ mgbe ịnụ ọkụ n'obi izizi iji hụ ka ọtụtụ akpa na-ahapụ ka ị were ụgwọ data ọnụego na batrị ndị ọzọ.
Ma n'ụzọ, amaara m na Ingress na-enwetakwa nzaghachi site na Pokemon, ahụrụ m ndị egwuregwu ọhụụ n'izu a karịa afọ a! Fọrọ nke nta na-enye gị maka otu isiokwu?
Ekwenyere m na ihe ị na-ekwu, ọ na-enye m na Ingress ga-agbakwunye ndị egwuregwu mgbe ndị na-egwu Pokémon GO chọrọ ihe dị omimi na ọkachamara dịka ọ na-eme na nke mbụ site na Niantic Labs.
Ọ bụ ihe yiri nke ahụ mere na World of Warcraft, na n'ihi ọtụtụ nde ndị egwuregwu ọ nwere, ọtụtụ bụ ndị mechara na MMO ndị ọzọ nwere omimi miri emi.
Enwere m ike ịme edemede banyere Ingress na ọfụma na Pokémon GO enweela ihe ịga nke ọma. Eziokwu dịwanye ka ọ dị ka ọ dị! Ugbu a, m na-eche ebe ọtụtụ nde dollar ndị ahụ ejiri mepụta eziokwu ga-abụ mgbe ha hụrụ na eziokwu dịwanye elu na-enweta nnabata dị ukwuu.
Android Marshmallow na-akụ 13,3% na July na ọnụ ọgụgụ nkesa ọhụrụ